मानवसेवामा समर्पित डा. केसीको साइक्लोन प्रभावित मोजाम्बिक मिसन : पाउरोटी र पानीको भरमा ३० दिन सेवा (फोटो फिचरसहित) – Health Post Nepal
२०७६ जेठ २ गते १७:३६
मानवमात्रको सेवालाई नै जीवनको एक मात्र ध्येय बनाएर चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ताका रूपमा उदाएका डा. गोविन्द केसीलाई नेपालीको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि क्षेत्र, भूभागमा बसोवास गर्ने जुनसुकै वर्ण र जातिका मानिसको पीडाले उत्तिकै पगाल्ने गर्छ । स्वदेश र विदेशका जुनसुकै भूभागमा प्राकृतिक प्रकोप तथा रोगको महामारीबाट मानव जाति पीडित हुँदा, रोग, भोक र शोकले पिरोलिँदा नितान्त व्यक्तिगत खर्च र प्रयासमा हल्लाखल्ला नगरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अहोरात्र पीडितको सेवामा खटिनु डा. केसीको मूल आदत हो ।
५ अप्रिलमा डा. केसी अफ्रिकाको साइक्लोन (सामुद्रिक आँधी) प्रभावित मोजाम्बिकको मापुतो सहर पुगे । १ अप्रिलकै लागि मापुतोयात्रा तय गर्ने निधो गरेका डा. केसीले स्वदेशकै टोर्नाडो प्रभावित बाराको भ्रमणलाई थप आवश्यक ठानी मापुतोको फ्लाइट क्यान्सिल गरेका थिए । अफ्रिकाकै हालसम्मको शक्तिशाली मानिएको साइक्लोनले मोजाम्बिकलाई क्षतविक्षत बनाएपछि डा. केसीलाई त्यहाँका जनताको आर्तनादले बेचैन बनायो । उनलाई उनीभित्र जीवनको एक मात्र लक्ष्य र आदर्शका रूपमा मजबुती प्राप्त गरेको मानवताले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सीमित रहिरहन दिएन । आफ्नो आदर्शको कमाइबाट खाई–नखाई जुगाड गरेको खर्चमा साइक्लोनपीडितको सेवाका लागि मोजाम्बिक हानिए ।
डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनका प्रमुख ३ उद्देश्य थिए । पहिलो, डा. केसी साइक्लोनले आहत मोजाम्बिकका जनताको घाउमा जतिसकेको मलम लगाउन चाहन्थे, समग्र नेपालीको तर्फबाट समग्र मोजाम्बिकनलाई सान्त्वना दिनु थियो, वैयक्तिक रूपमा पीडितको दुःख बाँड्नु थियो, प्रकोपले पिल्सिएका पीडितमा बाँच्ने आशा जगाउनु थियो ।
मिसनका ३ उद्देश्य
डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनका प्रमुख ३ उद्देश्य थिए । पहिलो, डा. केसी साइक्लोनले आहत मोजाम्बिकका जनताको घाउमा जतिसकेको मलम लगाउन चाहन्थे, समग्र नेपालीको तर्फबाट समग्र मोजाम्बिकनलाई सान्त्वना दिनु थियो, वैयक्तिक रूपमा पीडितको दुःख बाँड्नु थियो, प्रकोपले पिल्सिएका पीडितमा बाँच्ने आशा जगाउनु थियो । त्यसैगरी, डा. केसी साइक्लोनले घाइते भएका बिरामीलाई आफ्नो सीपअनुसारको स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन चाहन्थे । प्रकोपप्रभावित बिरामीको स्वास्थ्योपचारमा सक्दो सहयोग पुर्याउनु डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनको दोस्रो महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो । त्यस्तै, डा. केसी आफ्नो निजी प्रयासमा जोसकेको राहत सामग्री पीडितसमक्ष पुर्याउन चाहन्थे । डा. केसी कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगविनै व्यक्तिगत प्रयासमा औषधि, फलफूल, खाना, कपडा, सरसफाइका सामग्रीलगायत राहत सामग्रीमार्फत पीडित अफ्रिकनलाई राहत दिन चाहन्थे ।
अफ्रिकाको इतिहासमै शक्तिशाली साइक्लोन ‘इडाई’, मोजाम्बिक तहस–नहस
यसै पनि अफ्रिका महादेश आज पनि अन्धकारको महादेशका रूपमा परिचित छ । केही देशलाई छोड्ने हो भने अधिकतर काला जातिका मानिसको बाहुल्य रहेको आफ्रिकाका अधिकांश देश रोग, भोकमरी, शोक, गृहयुद्धलगायतबाट थलिएका छन् । यस्तै पीडा झेलिरहेको मोजाम्बिकलाई मार्चमा प्राकृतिक प्रकोपले तहस–नहस बनायो । अफ्रिकाको इतिहासमै शक्तिशाली रूपमा मापन गरिएको ‘इडाई’ नामक आँधीले मोजाम्बिकका धेरै भूभागलाई यसरी तहस–नहस बनायो कि, जसलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन दशकौँको कडा मिहिनेत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । साइक्लोनबाट हजारौँ मोजाम्बिकनले ज्यान गुमाए, लाखौँ घाइते तथा अपांग भए भने लाखौँले घरबार तथा रोजीरोटी गुमाए । विश्वको एउटा कुनामा आइपरेको यसकिसिमको पीडाले सुदूर नेपालमा योगीतुल्य जीवनशैलीमा मानवसेवामा अनवरत समर्पित, मानव मात्रको सेवामा कृतसंकल्प एक चिकित्सकलाई दुखायो र ऊ सेवाका लागि विस्तृत भौगोलिक दूरी पार गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो ।
हजारौँले ज्यान गुमाए, कैयौँ बेपत्ता, २० लाखभन्दा बढी विस्थापित
मोजाम्बिक भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा झन्डै ५ गुना ठूलो भए पनि जनसंख्याका हिसाबले नेपालकै हाराहारीको देश हो । मार्चमा आएको विनाशकारी साइक्लोनले मुख्यतः मोजाम्बिकका ५ लाख जनसंख्या भएको बेरा, डोन्डो, टिका, लामेगो, चमोइओलगायत क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो । साइक्लोनका कारण हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने कैयौँ हराए । मोजाम्बिक यसरी क्षतविक्षत भयो कि, प्रकोपमा ज्यान गुमाउनेको यकिन तथ्यांक समयको लामो कालखण्डसम्म पनि निकाल्न नसकिने अवस्था बन्यो । प्रकोपका कारण २० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको अनुमान लगाइएको छ ।
५ हजारभन्दा बढीको उपचार, ६० जटिल शल्यक्रिया, अध्यापनमा समेत सक्रिय
डा. केसी आफ्नो एक महिनाको मोजाम्बिक बसाइमा ३ हप्ताभन्दा बढी समय साइक्लोनप्रभावित मोजाम्बिकनलाई स्वयंसेवी चिकित्सकीय सेवा दिनमै तल्लीन रहे । मिसनमा डा. केसी मोजाम्बिकको मध्यभागमा अवस्थित ‘सेन्ट्रल हस्पिटल, बेरा’मा रही अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिए । बेरास्थित सेन्ट्रल अस्पताल राजधानी मापुतोदेखि करिब एक हजार एक सय किलोमिटर टाढा छ ।
यसक्रममा उनले करिब ५ हजार बिरामीलाई निःशुल्क उपचारसेवा प्रदान गरे, जसमध्ये ६० जनाभन्दा बढीको मेजर अप्रेसन गरे । डा. केसी यस अवधिमा पीडितको उपचारमा मात्र सीमित रहेनन्, उनले त्यहाँका मेडिकल विद्यार्थी तथा रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई पढाउनमा समेत सक्रिय रूपमा संलग्न रहे । डा. केसीले प्रभावित मोजाम्बिकनका स्वयंनिर्मित शिविर तथा झुपडीहरूको भ्रमण गरी पीडितलाई समग्र नेपालीको तर्फबाट सान्त्वना दिनसमेत भ्याए । कुनै पनि खाले सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नपाएका पीडितको झुपडीमा दुःख बाँड्न पुगेका डा. केसीले सहाराविहीन मोजाम्बिकनलाई आफ्नो क्षमताअनुसार ड्राई फुड, फलफूल, कपडा तथा सरसफाइका सामग्री वितरण गरे । डा. केसीको पीडितप्रतिको शुभेक्षाले समग्र नेपालीको विशाल हृदयको परिचय विश्वमाझ दिइरहेको थियो ।
फगत पाउरोटी र पानीका भरमा महिनादिन सेवा, चुहिने छाप्रोको बसाइ
डा. केसीले एक महिनाको मोजाम्बिक मिसनमा मात्र पाउरोटी र पानीको भरमा बिरामीलाई अनवरत सेवा दिए । साइक्लोनका कारण बेरा सहरको अवस्था यति नाजुक बनेको थियो कि, फुटपाथमा पाउरोटीबाहेक अन्य खाद्यसामग्री उपलब्ध थिएनन् । बसाइका क्रममा कहीँकतै भेटिएको कोकाकोलालाई कोकका पारखी डा. केसीले निकै फारु गरेर पिए ।
शक्तिशाली साइक्लोनले आवासका पक्की संरचनासमेत ध्वस्त बनाएको थियो । यस्तोमा डा. केसी सार्वजनिक बसपार्कमा पानी चुहिने टहरामा रात बिताउँथे र बिहानैदेखि पाउरोटी र पानीका भरमा अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिन्थे ।
डा. केसीको अनुभव र बुझाइमा मोजाम्बिकको स्वास्थ्यसेवा नेपालको तुलनामा निकै पछाडि छ । स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरणका गुणस्तर र आधुनिकताका हिसाबले मोजाम्बिक २०औँ वर्ष पछाडि रहेको डा. केसीको अनुभव छ ।
आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप–उद्धार मिसन, सबै निजी खर्चमा
डा. केसीको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन भने होइन । स्वदेशका जुनसुकै कुनामा वज्रपात हुँदा, जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीलाई आपत् आइलाग्दा, अलिकति पनि आफूबाट पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने महसुस हुँदा अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु डा. केसीको आदत नै हो । तर, उनलाई स्वदेशी जनताको पीडाले मात्र छुने भने होइन । यसअघि पनि डा. केसी प्रकोप प्रभावित विश्वका विभिन्न देशमा निष्काम सेवाका लागि पुगिसकेका छन् । पछिल्लो मोजाम्बिक मिसन डा. केसीको आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिसन हो । उनका यी सबै मिसन प्रकोपपीडितको सहयोगार्थ थिए र निजी खर्चमा थिए ।
डा. केसीको निष्काम सेवाबाट प्रभावितहरूको थप बसिदिन आग्रह, तर नियमित जिम्मेवारीले दिएन
ठिक एक महिनाको मोजाम्बिक बसाइमा डा. केसीको अपूर्व निष्काम सेवाबाट प्रभावित भएर केही समय थप बसिदिन अनगिन्ती अनुरोध आएका थिए । तर, उनी आफ्नो नियमित कामको जिम्मेवारीबाट विचलित हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक महिनाको छुट्टी लिएर गएका कारण समयमा ड्युटीमा फर्कनुपर्ने दायित्वबाट उनी उम्कन सकेनन् र काममा फर्किए । यो एक महिनाको मोजाम्बिक भ्रमणको आफ्नो अपेक्षाअनुसारको उद्देश्य पूरा गरेर ५ मेमा स्वदेश फर्किए ।
स्वास्थ्यसेवामा नेपालभन्दा पछाडि
डा. केसीको अनुभव र बुझाइमा मोजाम्बिकको स्वास्थ्यसेवा नेपालको तुलनामा निकै पछाडि छ । स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरणका गुणस्तर र आधुनिकताका हिसाबले मोजाम्बिक २०औँ वर्ष पछाडि रहेको डा. केसीको अनुभव छ । डा. केसीको बुझाइमा मोजाम्बिकको बेरा सहरमा स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भए पनि सेवाको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ, जसका कारण आर्थिक क्षमता हुने मोजाम्बिकन स्वदेशमा स्वास्थ्योपचार गराउँदैनन् । उनीहरू स्वास्थ्योपचारका लागि अफ्रिकाकै विकसित देश दक्षिण अफ्रिका जाने गरेका छन् । अधिकतर जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय भएका कारण उनीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । तसर्थ, यस्ता प्रकोपका आकस्मिक अवस्थामा मोजाम्बिकनका लागि स्वास्थ्यसेवाको आवश्यकता खड्किने गरेको छ ।